people Nepal » जावलाखेलमा सडक खन्दा गाडधन भेटियो ! जावलाखेलमा सडक खन्दा गाडधन भेटियो ! – people Nepal
जावलाखेलमा सडक खन्दा गाडधन भेटियो !
२५ माघ, ललितपुर । जावलाखेलस्थित महानगरीय प्रहरी परिसर कार्यालयकै अगाडि एउटा डोजर चलिरहेको छ । छेउमै मानिसहरु ‘कुखुराले भुतभुते खेलेझै’ गरेर माटो खोस्रिरहेका छन् । लाग्छ, त्यहाँ कुनै बहुमूल्य बस्तु हराएको पो हो कि ?
तर, केही हराएको होइन, भेटिएको रहेछ । खानेपानीको पाइप विच्छ्याउन प्रहरी कार्यालय अगाडि सोमबारबाट सडक खन्न थालिएको थियो । त्यसक्रममा माटोमुनि गाडिएको पैसाको भाँडो भेटियो ।
स्थानीयले बताए अनुसार माटोको भाँडामा राखेर गाडिएका पुराना सिक्काहरु (गाडधन) स्थानीयले लगे । प्रहरीहरु यसमा रमिते बनेर बसे । सडकमा भेटिएको रहल-पहल पैसा खोज्न त्यहाँ सोमबारदेखि नै मानिसहरु भिडिरहेका छन् । प्रहरीले रमिता हेरिरहेकै छ ।
सोमबार पैसाकेा भाँडो नै भेटिएको थियो, जुन त्यहाँ जम्मा भएका स्थानीयले लगेका छन् ।
आज मंगलबार पनि खन्ने क्रममा केही पैसा भेटिएको छ । त्यही भएर मानिसहरु त्यहाँ कुखुराले जसरी माटो खोसि्ररहेका थिए । केहीले सिक्का भेट्टाएका पनि छन् । भेटिएको सिक्का हेर्दा निकै पुराना जस्ता देखिए पनि खिया लागेका कारण त्यसमा लेखिएको केही बुझ्न सक्ने अवस्था छैन ।
सिडियो साहेब के भन्छन् ?
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक काफ्लेले माटोमुनि सिक्का भेटिएको पुष्टि गरे । उनले भने, यो खबर आएपछि संरक्षण गर्न पुरातत्व विभागलाई खबर गरेको थिएँ, उनीहरु आएर लगे भन्ने मलाई खबर आएको छ ।’
तर, मंगलबार पनि मानिसहरु बाटोमा पैसा खोजिरहेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा प्रजिअ काफ्लेले भने, यो मलाई थाहा भएन, तपाईले भन्नु भो, म फेरि बुझ्छु ।’
गाडधन भेटिएकोबारे पुरात्व विभागलाई सोध्दा स्मारक संरक्षण कार्यालयलाई भनिएको भनेर पन्छियो । यसले प्रहरीकै अगाडि भेटिएको पुरातात्विक सामाग्री प्रशासनको हातमा पुग्यो कि स्थानीयले लगे प्रष्ट छैन ।